Ny herin'ny fivarotana isam-batan'olona | Martech Zone
Ny herin'ny marketing manokana
Talata, Septambra 17, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Kyle Christensen
Tadidinao fa tamin'ny fotoana nanombohan'ny Nike ny fampielezan-keviny Just Do It? Nike dia afaka nahavita fahatsiarovan-tena tamin'ny marika sy mizana tamin'ity teny filamatra tsotra ity. Takela-by, TV, radio, pirinty… 'Just Do It' ary ny Nike swoosh dia n'aiza n'aiza. Ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra dia nofaritan'ny olona maro iza no azon'i Nike nahita sy nandre izany hafatra izany. Ity fomba fiasa manokana ity dia nampiasain'ny ankamaroan'ny marika lehibe nandritra ny varotra na 'vanim-potoanan'ny fampielezana' ary tamin'ny ankapobeny dia nanakoako tamin'ny mpanjifa izany ary nitondra ny varotra. Niasa ny varotra faobe.
Mandrosoa haingana eo amin'ny 30 taona eo, miditra amin'ny Internet, finday ary media sosialy, ary miaina amin'ny vanim-potoana hafa mihitsy isika. Ohatra, ny olona nandany $ 25 miliara amin'ny fividianana vita amin'ny telefaona sy takelaka tamin'ny 2012 fotsiny, 41% ny mailaka nosokafana amin'ny finday ary ny olon-tsotra mandany adiny enim-bolana ao amin'ny Facebook. Miorina amin'ny fiainan'ny mpanjifa ny haitao nomerika ary vokatr'izany dia maniry bebe kokoa amin'ny fifandraisan'izy ireo amin'ny marika ny mpanjifa. Te handre amin'ny marika eo amin'ny fantsona mety izy ireo, amin'ny fotoana mety ary miaraka amin'ny hafatra mifandraika amin'izany. Ho fanohanana an'io, a fanadihadiana momba ny mpanjifa Responsys farany teo nahita izao manaraka izao:
Ny fitomboan'ny filan'ny mpanjifa hanana fifandraisana manokana amin'ny marika dia nanova ny lalao ho an'ny mpivarotra. Mila teknolojia be pitsiny sy marketing marani-tsaina mba hampiroboroboana ny fifandraisan'ny mpanjifa maharitra sy ny fiatraikany amin'ny farany ambany. Androany, ny mpivarotra dia mila manolotra traikefa manokana ho an'ny mpanjifa amin'ny fantsona nomerika isan-karazany - ary amin'ny ambaratonga lehibe.
MetLife dia ohatra tsara. Raha mitsidika ny tranokalan'ny MetLife ny mpanjifa mba hanontany momba ny politikam-piantohana iray, ao ambadiky ny sehatra, dia miditra amina programa iray manokana izy ireo izay natao hanampiana ny mpanjifa hamita ilay dingana sarotra matetika. Manomboka amin'ny tranokala izany, saingy afaka manohy amin'ny alàlan'ny mailaka, fampisehoana ary SMS ho an'ny fampandrenesana sy ny fangatahana fanaraha-maso. Teny an-dalana, ny hafatra dia natokana ho an'ny sahan-kevitry ny mpanjifa tsirairay. Vita soa aman-tsara, ity programa ity dia miteraka fanandramana mpanjifa mahafinaritra, sady mamporisika ny mpanjifa hamita ny dingana ary ho lasa mpanjifa MetLife. Amin'ny tranga iray toy izany miaraka amin'ny MetLife, ity firaketana ny hafatra marketing manerana ny fantsona nomerika ity dia nahazo fahafaham-po ny mpanjifa avo kokoa noho ny fomba nentim-paharazana, tarihin'ny agents.
The Responsys Interact Marketing Cloud dia natsangana hanampiana ireo mpivarotra hanao izany karazana orkestra marketing izany. Ny sehatra dia miorina amin'ny manodidina ny mpanjifa, mamaritra ny fomba fitantanana ny fifandraisan'ny mpivarotra tsara indrindra eran-tany amin'ny fifandraisan'izy ireo amin'ny alàlan'ny mailaka, finday, sosialy, fampisehoana ary ny tranonkala. Ary, manome ekipa marketing miaraka amina vahaolana iraisana hiaraha-miasa, handrafetana, hanatanterahana sy hanatsarana ary hananganana fandaharan'asa marketing misy sehatra maro. Ny Interact Marketing Cloud dia manome hery ny mpivarotra hampiasa ny angon-drakitra, ny fombany, mba handefasana ireo hafatra mifandraika indrindra izay mitazona ny mpanjifa hirotsaka sy hividy mandritra ny androm-piainany.
Tags: marikamailaka Marketing-barotrahafatra ara-barotra. mailakapersonalizationvarotra mailaka manokanahafatra natokana ho azyvaliny
Kyle Christensen dia VP an'ny Marketing amin'ny Product ao amin'ny Valiny izay izy no tompon'andraikitra amin'ny fitondrana tetika fivarotana vokatra sy ny fametrahana ny Responsys Interact Marketing Cloud. Vao haingana indrindra, i Christensen dia talen'ny Senior Marketing of Product Marketing and Management ao Zuora, izay nitarihany ny varotra rehetra sy ny tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny fangatahana Z-Billing sy Z-Payments. Talohan'ny Zuora, Christensen dia nanangana marketing marketing vokatra ho an'ny tsipika vokatra Salesforce.com marobe, ao anatin'izany ny Service Cloud sy Data.com.
Planspot: hampiroborobo sy amidio ny hetsikao
Ny siansa amin'ny varotra ve sa ny kanto?